दलाल मिडियावालासँग किन माफी माग्ने ? Kasthamandap Daily
दलाल मिडियावालासँग किन माफी माग्ने ?
मुम्बई । बलिउड नायिका कंगना रनौतले भारतीय मिडियाकर्मीलाई दलालको संज्ञा दिँदै उनीहरुसंग माफी नमाग्ने बताएकी छिन् ।
एउटा गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय पत्रकार जस्टिन राव नामका पत्रकारसंग कंगनाको विवाद भएको थियो । जस्टिनले प्रश्न गर्ने वित्तिकै कंगनाले भनेकी थिइन् ‘तिमी मेरो दुश्मन बन्यौ । सा¥है घटिया शब्द लेख्छौ । यस्तो घटिया सोच कसरी आउछ ?
करिब साँढे छ मिनेट कंगना र जस्टिनविच विवाद हुँदा कंगनाले हिन्दी चलचित्र मणिकर्णिका राष्ट्रवादको विषयमा बनाएको भन्दै उक्त फिल्मको वारेमा पनि नराम्रो लेखेको टिप्पणी गरिन् । ‘के मैले राष्ट्रवादको विषयमा फिल्म बनाएर गल्ति गरेको थिँए ?’ कंगनाले प्रश्न गरिन् ।
कंगना र जस्टिनविच विवाद भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको काफी आलोचना भयो । कतिपयले कंगनालाई मिडियासंग माफी माग्न सुझाव पनि दिए । तर, कंगनाकी बहिनी रंगोलीले ट्वीट गर्दै नाङ्गा, देसद्रोही र देसका दलाल मिडियाकर्मीसंग माफी माग्न जरुरी नभएको टिप्पणी गरेकी छिन् । एजेन्सी